Lahatsoratra nataon'i Jessica Hawthorne-Castro momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Jessica Hawthorne-Castro
Alakamisy, Aprily 13, 2017 Jessica Hawthorne-Castro
Ny fisarihana mpanjifa vaovao raha manatsara ny endrika marika ankapobeny dia fanamby maharitra ho an'ireo mpivarotra. Miaraka amin'ny sehatry ny haino aman-jery sombin-javatra sy ny fanelingelenana ny fizahana maro, sarotra ny manitsy ny filan'ny mpanjifa amin'ny fandefasan-kafatra kendrena. Ireo mpivarotra nifanatrika tamin'ity fanamby ity dia matetika nitodika tany amin'ny "manipy azy amin'ny rindrina mba hahitana raha miraikitra" io, fa tsy paikady kasaina kasaina kokoa. Ny ampahany amin'ity paikady ity dia tokony mbola ahitana fanentanana amin'ny doka amin'ny fahitalavitra,
Alakamisy, Jolay 7, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Jessica Hawthorne-Castro
Rehefa mihabe ny fomba fanaovana dokambarotra nomerika sy ny morph, ny orinasa dia mandany vola bebe kokoa amin'ny fanaovana dokambarotra amin'ny fahitalavitra mba hahatratrarana ireo mpijery mandany 22-36 ora mijery TV isan-kerinandro. Na eo aza ny tabataban'ny indostrian'ny dokambarotra dia mety hitarika antsika hino tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, milaza ny fihenan'ny fahitalavitra araka ny ahalalantsika azy, fa velona kosa ny doka amin'ny fahitalavitra ary mamokatra vokatra marim-pototra. Tamin'ny fanadihadiana vao haingana MarketShare izay nanadihady ny zava-bitan'ny dokambarotra manerana ny indostria sy ny haino aman-jery toa